John Dory - inhlanzi nge umzimba shape engavamile, okuyinto ibhizinisi ikhadi layo. Ukuze ososayensi, kuyathakazelisa ngoba an amazing ukumaska uhlelo ezingaba ulifihle kusuka izitha eziningi. Njengoba kakhulu kubadobi, ngabo ukudoba Dory - indondo enhle, athandwayo futhi engaqondakali.
Entshonalanga, eyaziwa ngokuthi Dory "izinhlanzi St Peter." Lokhu kungenxa nganekwane yasendulo ichaza ukuvela izimpawu Waphezulu emzimbeni wakhe. Ngakho, lezi zindaba bathi umphostoli wayethanda nokudoba ogwini ka oLwandle LwaseGalile, uphonsa amanetha emanzini ongagcwali. Uma wabona John Dory, amancane kangaka futhi abangakwazi ukuzilwela, uPetru wamhawukela bese abadedela zibuyiselwa olwandle.
inhlanzi Nokubonga wabuyela umphostoli ngohlamvu lwemali igolide emlonyeni, sibonga sakhe sokuba nesandla esivulekile. Futhi, ngokuvumelana kwale nganekwane, amabala amabili amnyama ezinhlangothini sunfish - a iminwe St Peter. Bakhonza njengoba iwuphawu lokuthi ngukhokho lezi zinhlanzi wasendulo sasibonisa ncengani isihe umPhostoli okukhulu, yeka isibusiso wawela phezu lonke uhlanga lwabo.
Imininingwane kawonkewonke kwifomu
Kwazi bani ukuthi iqiniso kakhulu itholakala kulezi izindaba? Phela, ubufakazi obuphathekayo sokusebenza kwabo, vele asizange sisinde. Nokho, ku-abameleli yesimanje kwalesi silwane, ososayensi bayazi kakhulu, esengaphezu abacwaningi kweshumi wahlanganyela abakufundayo.
Ake uqale nge iqiniso lokuthi Dory izinhlanzi - kummeleli solnechnikovyh umndeni. Izihlobo zabo abaseduze kukhona Perciformes. Ngesikhathi esifanayo endaweni yazo yemvelo iyamangalisa ngempela: lezi zinhlanzi zitholakala empumalanga Atlantic, ngasogwini South Africa, ngasogwini lwe-Indian Ocean futhi ngasogwini China ne Japan.
inhlanzi Dory has a ukubukeka engavamile kakhulu, ngenxa yini isithakazelo esiqotho phakathi abathandi zomhlaba ngaphansi kwamanzi. NgoLwesine kutholakale isidumbu sendoda okusaqanda wakhe, kakhulu onomfutho emaceleni. Mhlawumbe kungaba ngcono ukwethula ke njengoba ulwe, kodwa onomfutho thwi. umumo okunjalo kwenza izinhlanzi ukuthuthukisa ngesivinini lube njengofakazi ikhadi trump kulokhu kuhlasela, futhi ngesikhathi indiza.
Enye impahla Kuyaphawuleka yokhalo oluhlabayo esukela kumila umsila futhi inhloko. Empeleni, lezi amaphiko amabili amaphiko, kodwa ezinye izinhlobo zawo basuke okwakuthandelene ngokuphelele zibe munye. Futhi kuwufanele Dory bethukile - futhi ikamu lakhe ngokushesha imi ekupheleni, sibekwe obala eziningi inalidi ebukhali. Ukubona vest enjalo wameva, abahlukumezi eziningi musa alinge ukuhlasela kwakhe, kokushintshela inyamazane ihlanganise ngaphezulu.
Ubukhulu Dory kakhulu incike kule ndawo. Ngenxa yalokho, abanye sub-kwezinhlobo zezinhlanzi ongafinyelela 60-70 cm ubude, kanti abanye neze sikhule embundwini 15 cm.
inhlanzi Dory - unkom 'idlayodwa yangempela. Yena ayithandi ukuba ubuthe nezimvu, nakakhulu ukwenza abangane phakathi nezinye izakhamuzi zaseMpumalanga ekujuleni kolwandle. Yena wayethanda crannies amnyama izixhobo zama-coral noma umcengezi ezinkulu. Ngezinye izikhathi ngisho kanjalo, ukuthi luhlala ngesikhathi amamitha angaphezu kuka-200 ukujula, ukuze kuvikelwe ngokugcwele ukuziqhelelanisa omakhelwane awayiphazamisi.
Kufanele kuphawulwe ukuthi inhlanzi Dory - a chameleon. It uyakwazi ukushintsha linjani ibala lakhe lesikhumba, kanjalo ezishaya imvelo. Le ndlela yokwenza kuyasiza ukuzivikela futhi ukuhlasela. Yini engashiwo, isikhumba sakhe ayikwazi ukubonisa yonke imibala ekhona, konke ayengakwenza - ukuzivumelanisa zamanje umbala amanzi.
Lezi zinhlanzi - the izilwane ezidla ezinye yangempela. Njengoba perches, yini ezincane kuno ubungako bawo, yiwo ukudla. Ngakho they cha oluhlehlela kadoti noma izimpethu okuyinto engaqondile yawela emanzini. Futhi ngokuhamba angaya ezinamagobolondo, ama-squid futhi jellyfish.
Kuyini ephawulekayo ukuthi sunfish angasebenzisa umlomo wakhe efana vacuum cleaner. Podplyvaya okupakisha inhlanzi encane, uqala ncela emanzini, ngaleyo ndlela kudale ukugeleza reverse. Yiqiniso, inhlanzi encane futhi ebuthaka ayikwazi ukumelana namandla akhe, ngakho ukubhukuda aqondile sunfish emlonyeni.
Incazelo Horsy-humpback kusukela inganekwane "The Humpbacked Horse" nguP. P. Ershov
UVladimir ezibiyele: Umlando kanye nencazelo
Kuyini ukuzimela kanye nendlela yokubhekana nayo?